တရုတ်နိုင်ငံက ဟဲနန်ရေဘေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ယွမ် ၃ ဘီလီယံ ခွဲဝေသတ်မှတ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်နေသော Xinxiang မြို့၌ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများက ဒေသခံများအား ဘေးလွှတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် ရေကြီးရေလျှံမှု ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ထောက်ပံ့ရန် ယွမ် ၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆၃ ဒသမ ၄၃ သန်းခန့်) လျာထားကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။အဆိုပါ ရန်ပုံငွေများသည် ဗဟိုဘဏ္ဍာရေးရန်ပုံငွေမှ ခွဲဝေသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းရန်ပုံငွေများအား ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီးနောက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ Website စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘေးအန္တရာယ် စိစစ်အတည်ပြုရလဒ်များအပေါ် အခြေခံပြီး ဘဏ္ဍာရေးအထောက်အပံ့များထပ်မံ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရအနေဖြင့် ရန်ပုံငွေများအား အချိန်မီ ခွဲဝေချထားပေးရန် နှင့် ရေကြီးရေလျှံမှု ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အရည်အသွေးမြင့် လုပ်ဆောင်ကြရန် ဝန်ကြီးဌာနက တိုက်တွန်းထားသည်။
ဟဲနန်ပြည်နယ်၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ဇူလိုင် ၂၇ ရက် နေ့လည်ပိုင်းအထိ ၇၁ ဦးထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရ ပြန်ကြားရေးရုံးက ဇူလိုင် ၂၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
China allocates3bln yuan for Henan flood recovery
BEIJING, July 27 (Xinhua) — China has earmarked3billion yuan (about 463.43 million U.S. dollars) to support flood control and disaster recovery in the central province of Henan, the Ministry of Finance said.
The death toll from torrential rain in Henan has risen to 71 as of Tuesday noon, said the information office of the provincial government atapress conference on Tuesday. Enditem
Photo – Volunteers help evacuate stranded residents in flood-hit Xinxiang City, central China’s Henan Province, July 24, 2021. (Xinhua/Hao Yuan)